Dowladda Somaliya oo ugu dambeyen xabsiga u taxaabtay Cali Yare | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dowladda Somaliya oo ugu dambeyen xabsiga u taxaabtay Cali Yare
Dowladda Somaliya, ayaa waxay xabsiga dhigtay Cali Cabdi Wardheere (Cali Yare), oo ka mid ah dhalinyarada Somaliyeed ee dalka dibadiisa ka soo laabatay. Wuxuuna gaar ahaan ka soo laabtay dalka Sweden.
Wasaaradda Amniga Somaliya, ayaa Isniintii Cali Yare iyo shakhsiyaad kale ku soo eedeysay, inay samaysteen magacyo ay lee yihiin qaar ka mid ah Masuuliyiinta Xukuumadda, isla-markaana ay ku adeegsadaan barraha bulshada ku wada xiriirto. Cali Yare waxa uu si xoogan kaga horyimid eedeymahaasi, wuxuuna ku sheegay wax la siyaasadeeyay.
Ciidanka Hay’adda Nabad Suggida, ayaa waxaa la tilmaamay inay iyagu soo xireen Cali Yare, Khamiistii. Waxaana leesla dhex marayaa in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu bixiyay amarka lagu xiray.
Nabad Suggida, ayaa la soo sheegayaa in Cali Yare ay ku xirtay Xarunta Godka Jilicow, oo ku taala Degmada Boondheere, iyadoo ayna Nabad Suggida degan tahay. Warar kalana waxay sheegayan in lagu xiray Xarunta Xisbiga, oo ku dhex taala Madaxtooyada Magaalada Muqdisho.
Xariga Cali Yare, ayaa waxay dadka qaarkii u arkaan mid siyaasadaysan, iyadoona lagu haysto in uu u olalaynaayay Axmed C/salaan Xaaji Aadan, oo ka mid ah Musharaxiinta Madaxtinimada Maamulka Gobolada Dhexe.
Nabadoon Cabdi Guure oo ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee ku sugan Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud, ayaa Arbacadii sheegay in Cali Yare lagu haysto dulmi iyo gardaro, sida uu yiri.
Cali Yare, ayaa dhowr goor laga xanibay safar uu ku taggi lahaa Magaalada Cadaado. Taliska Nabad Suggida ee Garoonka Aadan Cadde, ayaa u sheegay inaanu ka bixi karin Magaalada Muqdisho.